The 20 best home services 2019 ― DoneMaster မွနျမာ
A&J Interior & Exterior Creative Design
လူကြီးမင်းတို့ နေအိမ်၊ လုပ်ငန်းအပေါ် မူတည်၍ ပြုလုပ်လိုသော Shop Design / Booth Design / Hotel / KTV / Restaurant စသဖြင့် Interior & Exterior Design များကိုရေးဆွဲပေးလျှက်ရှိပြီး Installation အတွက် လိုအပ်သော တိကျပြည့်စုံမှုရှိသည့် Elevation / Detail Drawing Files များဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
မီးရောင်များဖြင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်အလှဆင်နိုင်ခြင်းဟာ ပိုမိုအရေးကြီးပါတယ်။
သင့်ဆိုင်ရဲ့ အခင်းအကျင်းကို ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိစေပြီး
ကျွန်တော်တို့ A.G.O.P နဲ့ လက်တွဲဆောင်ရွက်ပြီး
သင့်ဆိုင်ရဲ့ အသွင်အပြင်ကို ပိုမိုဆန်းသစ်လှပမှုရှိအောင်
Aviva Interior Design, Decoration & Renovation, Yangon, Myanmar
အ ကောင်းဆုံး ဒီဇိုင်းများ ကိုဖန်တီးခြင်း နှင့် သင်၏ စိတ်ကျေနပ်အားရအောင် အကောင်းဆောင်ဝန်ဆောင်မှုများ ကိုပေးဆောင် ခြင်း
Capella Doors and Windows Manufacturing and Installation - Yangon, Myanmar
ပြတင်းပေါက်အမျိုးမျိုးများကို ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုး,မှန်တံခါးအမျိုး တို့ ပြုလုပ်တပ်ဆင်ပေနေပါပြီ။ အမှားချို့ရွင်းမှူမရှိအောင် အသေးစိပ်ကအစ အသေခြာအလေးအနက်ထား၍ပြုလုပ်တပ်ဆင်ပေးနေပါတယ်
creative FOX Design & Build
Creative Fox သည် လူကြီးမင်းတို့အတွက် Interior နှင့် exteriors အတွက်ဒီဇိုင်းများကို ဆောက်လုပ်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှူများသာမက လူကြီးမင်းတို့စိတ်ကြိုက်ပုံစန်များကို တည်ဆောက်ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
Design Hub Co.,Ltd.
Greenlam High Pressure Laminate သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ HPL အများဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်သော ကုမ္ပဏီသုံးခုအနက် တစ်ခုအပါအ၀င် ဖြစ်ပြီး ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေး နှင့် ထူးခြားပြောင်မြောက်သောဒီဇိုင်းများကို ပေးစွမ်းနိုင်သူအဖြစ် ရပ်တည်နေပါသည်။
နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မူအင်အား မှာ ၁၄.၀၂ သန်း ဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးသာလွန်ကောင်းမွန်၍ စံချိန်စံနှုန်းမှီ ထွက်ကုန်များကို ထုတ်လုပ် ရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။
အာရှတိုက်၏ ပထမဆုံး ရွေးချယ်မူတိုင်းတွင် ရောဂါပိုးမွှားကင်းစင်ပြီး ကျန်းမာရေး နှင့် ညီညွတ်သော HPL ဖြစ်သည့် Greenlam High Pressure Laminate ကို Design Hub Myanmar Co., Ltd မှ 2016 ခုနှစ်တွင် စတင်၍ တစ်ဦးတည်း ကိုယ်စားလှယ် အနေဖြင့် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး
Eda-Archi သည် ရန်ကုန်မှာတည်ရှိပြီး လူကြီးမင်းတို့အတွက် Interior နှင့် exteriors အတွက်ဒီဇိုင်းများကို နိုင်ငံခြာမှ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် များကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းဆွဲဆောက်လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
EHK Group Co.,Ltd. Home Decoration & Construction
🏡အရစ်​ကြစနစ်​ဖြင့်​ အိမ်​​ဆောက်​မယ်​ဆိုရင်​ ဘာ​တွေလိုအပ်​လဲ ........
🏠 ​မြေပိုင်​ဆိုင်​မှု ​ဖော်​ပြခြင်း
👥 နိုင်​ငံသား မှတ်​ပုံတင်​
👪 အိမ်​​ထောင်​စု ဇရား
🏠 ​မြေပိုင်​ဆိုင်​မှု က ဘယ်​လို​မြေ အမျိုးစား​တွေ ရတာလဲ ...... ?
🏠 အရစ်​ကျ ​ပေး​ချေ ရမည့်​ ပုံစံ
💵 50% ​ပေး​ချေ ပြီး
💵 50% ကျ န်​​ငွေကို
​မိမိ payment ​ပေါ်မူတည်​ပြီး
6 month / 10 month / 12 month
💰အတိုးနှု န်းက ဘယ်​​လောက်​လဲ...?
အတိုးနှု န်း 3% ဖြင့်​ တွက်​ချ
M.ID - M.Interiors Design
ဒီဇိုင်နာ မြမြင့်ဇူသည် နိုင်ငံခြားတွင် ပညာသင်ယူကြီး Beverly Hills ဒီဇိုင်းစတူဒီရိုတွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး အခုအချိန်တွင် မြန်မာနိုုင်ငံ၏ ဗိသုကာပညာနှင့် အင်ဂျင်နီယာနည်ပညာများ ဖြင့် ဒီဇိုင်း firm ကိုဖွင့်လှစ်ထားပြီး မြန်မာနိုုင်ငံ၏ Local design guru ဟု အမည်တွင်နေသူတဦးဖြစ်ပါသည်။ ဆောက်လုပ်ပးခဲ့သော နေရာများမှာ Rau Ram,Rangoon Tea House,Toddy Bar နှင့် The Tea House တို့ဖြစ်ပါတယ်
Metric Interior Decoration and Design Factory
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့နေ့ရက်တွေကို လန်းဆန်းတက်ကြွ ပျော်ရွင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ဆို သင့်အိမ် သို့မဟုတ် သင့်အခန်း လေးလှပနေ ဖို့တော့လို မယ်နော်...
တစ်နေကုန်ပင်ပန်းတာတွေအမောပြေစေဖို့ METRIC Interior Design & Decoration Co.,Ltd ကို ယုံကြည်စွာအပ်နှံလိုက်ပါ..... ယနေ့ခေတ်ရဲ့လူနေမှုပုံစံအရ လှပဆန်းသစ်မှ တင့်တယ်နိုင်မှာ နော်… အသစ်အဆန်းတွေလုပ်နိုင်လေလေ ပိုပြီး လူသိများလေလေပါပဲ…
ဒါကြောင့် METRIC Interior Design & Decoration Co.,Ltd မှသင့်ရဲ့လှပတဲ့ နေ့ရက်တွေကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီ. လူအများစုဟာ မိမိတို့ပင်ပန်းစွာ ရှာဖွေထားတဲ့ ဥစ္စ္စာပစ္စည်းတွေကို ဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဆိုတာ မေ့နေတတ်ပါတယ်. ဒါတွေကို အသုံး ချ ဖို့ဆို
Myanmar Home Artist -Home Interior Designs and Decoration Co.Ltd
Myanmar Home Artist Decoration Company ကို 2017 မှာ စတငျတညျထောငျခဲ့ပါသညျ။ လူကွီးမငျးတို့၏ နအေိမျအလှဆငျခွငျးနှငျ့ ပကျသတျသော 3D Virtualized Design မြားရေးဆှဲပေးခွငျး ဖွငျ့ လူကွီးမငျးတို့၏ စိတျတိုငျးကြ အကောငျးမှနျဆုံးနဲ့ အလှပဆုံးဖွဈအောငျ ပုံဖျော အသကျသှငျး ဖနျတီးပေးနပေါသညျ။ လူကွီးမငျးတို့၏ နအေိမျမြား၊ ရုံးခနျးမြား၊ ဆိုငျခနျးမြားအတှကျ one stop service အနနေဲ့ ရေ မီး ဆေး အပါအဝငျ customizes furnitures မြား counter မြား Flooring work မြားအနဖွေငျ့လညျး Tiles မြား HD laminate floor မြားကိုလညျး ခငျးကငျြးပေးသညျ့အပွငျ M&E Work မြားကိုပါကြှမျးကငျြ လုပျသားမြားနဲ့ အငျဂငျြနီယာမြားဖွငျ့ အကောငျးမှနျဆုံးဖွဈအောငျ
လူကြီးမင်းတို့ အတွက် 👈👈👈👈👈
Myanmar Home Interior Decoration Construction and Renovation လုပ်ငန်းများကို စိတ်တိုင်းကျဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက် ပေးနေပါသည်။
Steel Structure & RCC Buinding အဆောက်အအုံ နေအိမ်တိုက်တာ ဆိုင် ဂိုဒေါင် များ ဆောက်လုပ် တည်ဆောက်ပေးခြင်း က စလို့ အဆောက်အဦး အတွင်းအပြင် အချောထည် ပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်း ရေ မီး လေအေးပေးစက် တပ်ဆင်ပေးခြင်းများ အပြင် ခြံဝန်း ပန်းခြံ ဥယျာဉ်ငယ် ရေကန်တံတား စတဲ့ ရှုမငြီးဖွယ် သာယာအေးချမ်းမှု ရသ များ ဖန်တီးပေးခြင်း တွေကို စိတ်တိုင်းကျကျ လှလှပပနဲ့ မိမိနေအိမ် အဆောက်အအုံ တစ်ခုကဲ့သို့ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေပါသည်။
Myanmar Woodpecker Company
လူကြီးမင်းတို့အိမ်နဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးပုံစံကို Design အပ်နှံသည်မှ စ၍ ပြီးစီးသည်အထိ အစအဆုံး တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီ ခင်ဗျာ
We stand because of you.
ကျနော်တို့ဘက်က ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့ အချက်တွေ လုပ်နိုင်တာတွေကို တာဝန်ယူပါမယ်
စိတ်ကျေနပ်စေဖို့ ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေဖို့ သတ်မှတ်ကာလမှာ ပြီးစေဖို့ ဆိုတာတွေက ကျနော်တို့ &apos;&apos;တာဝန်ယူပါတယ်&apos;&apos; ဆိုတဲ့ စကားရပ်မှာ အကုန်ပါပြီးသားပါ
ဟုတ်ကဲ့ လူကြီးမင်းတို့ ယုံကြည်မှုနဲ့ ပံ့ပိုးတည်ဆောက်ပေးလို့သာ အခုအချိန်အထိ တစတစ နာမည်ရလာတာပါလို့ ကျေးဇူးတင်ရင်း
လုပ်ငန်းအပ်နှံမည့်သူများကို #MWY မိသားစုမှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုလျှက်
Royal shelf စင် အမျိးမျိး
မင်္ဂလာပါ ညီမတို့.Royal. Shelf. မှ ဝယ်​ယူအား​ပေးကြတဲ့မိဘညီအကို​မောင်​နမများ စိတ်​၏ချမ်းသာချင်းကိုယ်​၏ကျန်းမာချင်းနဲ့ပြည့်​စုံကြပါ​စေ ညီမတို့စင်​​လေး​တွေနဲ့လည်း​မိတ်​ဆက်​​ပေးပါရ​စေ ဒီစင်​​လေး​တွေက အားလုံးပဲသံထည်​နဲ့ပြုလုပ်​ထားလို့ ​တောင့်​တင်းခိုင်​မာမှုရှိပါတယ်​ ရန်​ကုန်​မြို့တွင်းဆို ပို့လဲပို့စင်​လဲဆင်​​ပေးပါတယ်​ နယ်​ဆိုရင်​​တော့ဂိတ်​ချ​ပေးပါမယ်​ ပို့ခစင်​ခမ​ပေးရလို့မိဘညီအကို​မောင်​နှမများယုံကြည်​စိတ်​ချ စွာ အသုံးပြုနိုင်​လို့ဝယ်​ယူအား​ပေးကြပါအုံး​နော်
SCZ Engineering - Energy Saving Solution
☔️ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း မိုးရာသီနဲ့ဆောင်းရာသီမှာ လူကြီးမင်းတို့၏ ရေကူးကန်ထဲကရေတွေက အေးလွန်းလို့ ဧည့်သည်တွေ အသုံးမပြုနိုင် Complain တွေရှိလာလို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား??
💰 ရေကူးကန် အပူပေးစနစ်လည်းသုံးချင်တယ်။ ကုန်ကျမဲ့စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်ကြီးသွားမှာအတွက်လည်း စဉ်းစားနေရပါသလား??
‼️ရေကူးကန်အပူပေးစနစ် အသုံးပြုခြင်းကြောင့် အသုံးပြုသူ(ဧည့်သည်)တွေအတွက် လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ရှိမှာ စိတ်ပူနေရပါသလား??
‼️လူကြီးမင်းတို့၏ အိမ်၊ ဟော်တယ်၊ ကွန်ဒိုတွေမှာရှိတဲ့ ရေကူးကန်များအတွက် နွေ၊မိုး၊ဆောင်း သုံးရာသီိမရွေး သက်တောင့်သက်သာအပန်းဖြေနိုင်မဲ့ အပူချိန်မျိုးနဲ့ ရေကူးကန် အပူပေး စနစ်မျိုး၊ လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းဝေးပြီး စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်
Silver Lotus Interior Design & Decoration, Construction and Home Deco
ကျွန်ုပ်တို့ Silver Lotus Interior Design & Decoration Company ဟာ အဆင့်မြင့် လူနေအိမ်များ ၊ ကွန် ဒိုများ ၊ ဟိုတယ်များ ၊ ဆိုင်ခန်းများ ၊ ရုံးခန်း နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကျောင်းများမှ စ၍ အထင်ကရ နေရာ များ (ကရ၀ိတ်နန်းတော်) ထိ Design အပါအ၀င် Decoration ကိုTurn Key Project အနေ ဖြင့်နိုင်ငံခြားအတွေ့ အကြုံ ရင့်ကျက်ကျွမ်းကျင် သော Australian ပညာရှင်ကိုယ်တိုင် အဆင့်မြင့် နည်းပညာများဖြင့် နည်းစနစ်မှန် ကန်တိကျစွာ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်.။
ထိုမှတဆင့် အဆောက်အဦးများကို ဗိသုကာဒီဇိုင်းအဆင့်မှ စတင်ပြီး ဆောက်လုပ်ခြင်း ၊ Sporting Field နှင့် ကစားကွင်း တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများကိုလည်း ချဲ့ထွင်လုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်….။
အသေသပ်ဆုံးလက်ရာ အသက်သာဆုံးဈေးနှုန်းနဲ့ Design & Decoration ပြုလုပ်လိုသော Customer များအတွက် One Stop Service ဖြင့်ပြုလုပ်ပေးပါသည် 🤗🤗
👉 👉 Simple interior Design နှင့်ဆက်သွယ်ပေးပါ။
လူကြီးမင်းတို့၏ Showroom, ဆိုင်ခန်း, တိုက်ခန်း, နေအိမ် တို့အတွက်
👉 Site survey ဆင်းပေးခြင်း
👉 လူကြီးမင်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကို အကောင်းဆုံး Design ရရှိရန်အတွက် အသေးစိတ်ဆွေးနွေးပေးခြင်း
👉 2D Layout Plan, 3D Design, Detail Drawing ရေးဆွဲပေးခြင်း
👉 ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများဖြင့် Partition, Ceiling, ဆေးသုတ်ခြင်း, Wallpaper ကပ်ခြင်း, Laminate Floor ခင်းခြင်း Vinyl Floor
Thit Sar Interior Design & Home Decoration
မင်္ဂလာပါ Cilent အ‌ပေါင်းတို့‌ရေ..!!
မြန်‌မာ‌ငွေ ၁၀ သိန်းရှိရုံနဲ့ သင့်‌ရဲ့အခန်းကို
ကျ‌နော်‌တို့ #ThitSar မှ မြန်‌မာပြည်‌ရဲ့ ပထမဦးဆူံး အသက်‌သာဆုံး‌သော အတိုးမဲ့အရစ်‌ကျ အိမ်‌ပြင်‌စနစ်‌ကို မိတ်‌ဆက်‌‌ပေးလိုက်‌ပါပြီ။
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ အိမ်‌‌‌တွေကို မိမိတို့ စိတ်‌ကြိုက်‌Design များနှင့်‌ ပြင်‌ဆင်‌နိုင်‌ပြီး ကြိုသွင်း‌ငွေ ၁၀ သိန်းကျပ်‌ကို သွင်းထားရုံဖြင့်‌ ကျန်‌‌ငွေကို ၃လ အရစ်‌ကျ‌ပေးသွင်းနိုင်‌တဲ့ အတိုးမဲ့စနစ်‌ဖြစ်‌ပါတယ်‌။ ဥပမာ - လူကြီးမင်းရဲ့ အိမ်‌ပြင်‌ဆင်‌စားရိတ်‌ဟာ သိန်း ၃၀ ကျတယ်‌ဆိုရင်‌ ၁၀ သိန်းကျပ်‌သာ စာချုပ်‌ချုပ်‌ချိန်‌မှာ
XYZ home Design Construction & Decoration
မင်္ဂလာပါ XYZ home Design Construction&Decoration Com,Ltd.မှ လူကြီးမင်းတို့၏ အဖိုးတန် အထပ်မြင့် အဆင့်မြင့် RC အဆောက်ဦးများ|Hotelများ|Steel Structure အဆောက်ဦးများ|အဆင့်မြင့် လုံးချင်းအဆောက်ဦးများ|Home,Store shop,Office,KTV,Bar,Restaurants,Cafe,Cold Drink shop,LoGo,SPA,Counter,Food Court ,Fast Food,Fashion Shop, Cometic Shopစသောလုပ်ငန်းများ
M&E လုပ်ငန်း များ,ဆေးသုတ်ခြင်း, ကြွေပြား ,မျက်နှာကျက် ,ပါကေးလုပ်ငန်း, စားပွဲ,ကုလားထိုင်, ငြမ်းဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့် Interior/External Design &Decoration လုပ်ငန်းများအား
* လုပ်ငန်းအပ်နှံပါလျှင် ခေတ်မှီလှပသော Design များဖြင့် Design "အခမဲ့ ရေးဆွဲပေးခြင်း”
ထူးခြားဆန်းသစ်သော အဆောက်အဦးဒီဇိုင်းများ🏠🏬🏛 ကို သင့်တင့်မျှတသော ဈေးနှုန်း💸💵 ဖြင့် Yangon DECO ၏ ပညာရှင်များမှ ဖန်တီးပေးနေပါပြီ။